Hotakiana hetra ny Ambasady vahiny eto Madagasikara??? | Hevitra MPANOHARIANA
Hotakiana hetra ny Ambasady vahiny eto Madagasikara???
2010-01-03 @ 20:59 in Andavanandro
Tsy mampino ny zavatra henoko, ka aleo apetraka eo amin'ny sehatry ny tsahotsaho, saingy ilay karazana tsaho sahala amin'itony ilay tena ahiako ho tanteraka rehefa heno ihany. Efa nanoratra ihany aho tamin'ny herintaona fa ny tsahotsaho tsy mampino fa toa fanaratsiana no iheverana azy no tontosa tokoa avy eo ka mitampim-bava fotsiny ireo naheno mialoha ka nilaza hoe resaka adala izany. Iza moa no nieritreritra hoe takiana IBS ny FJKM amin'izao fotoana izao? Mbola io irery aloha ny fiangonana mbola nilaza fa takiana io hetra natokana ho an'ny orinasa na tranombarotra io hatramin'izao... izay heverina ho antsojay manokana aloha hatramin'izao. Fa hay... raha amin'ity resaka henoko, mbola apetraka ho tsaho ity saingy aleo soratana sao tanterahin-dry zalahy tokoa, ity dia vao fanombohan-draharaha fotsiny io manjò ny FJKM io fa ho avy koa ny anjaran'ny hafa.
Re ary fa nanome (baiko tamina Minisitra hamoaka) naoty ingahy milaza ho filohan'ny FAT hitaky hetra amin'ny Masoivoho vahiny, sampan- draharaha iraisam-pirenena na/sy miankina amin'ny Firenena Mikambana, fikambanana vahiny tsy miankina manao asa soa fa hotakiana hetra koa ireto farany ireto. Raha manoratra aho dia mahafantatra tsara fa tahaka ny resaka adala izany, saingy efa nametraka tsara aho fa misy zava-kendrena ao matoa mivoaka ny zavatra sahala amin'itony. Izany hoe eto dia fomba mihaja handroahana ny vahiny rehetra ankoatra ny Frantsay no tanjona ary iny lalana iny no mizotra tokoa ho amin'ny fanjanahana indray an'i Madagasikara. Voararan'ny lalàna iraisam-pirenena na ny fifanarahana iraisam- pirenena ny famoahan-javatra tahaka izany, na ireo mpiasa nahita io naoty io aza dia nilaza izany hoe, saingy tsy noraharahiany izany fa tiany hotanterahina. Sahy milaza aho, fa raha vao nahare io siosion-dresaka io, dia nanao hoe tena sahiny ny mandray fanapahan-kevitra tahaka izany.
Tsy vao voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara manko no nisy toe-javatra sahala amin'izany fa efa nisy tokoa io tamin'ny taona 1975 tany ho any raha mody narangaranga ny antsoina hoe fitiavan-tanindrazana sady natao izay hamaritana fa ny fitiavan-tanindrazana dia midika hoe fankahalana ny vahiny rehetra sy ny fandroahana azy hiala an'i Madagasikara. Efa hitantsika amin'izao fotoana izao fa mandrangaranga ny antsoina hoe fiandrianam-pirenena ny FAT ary tsy sarotra ny hino fa vitany indray izany. Nanana ny lazany manko izany hopitalin'i Manambaro izany amin'iny faritra antsimon'ny nosy iny. Maro ny olona no nizotra nankany hotsaboina noho ny hatsaran'ny fitsaboana tany izay maimai-poana araka ny fahalalako azy. Ny Amerikana no nikarakara ny hopitaly na dia eo ambanin'ny anaran'ny FLM (Fiangonana Loterana malagasy) aza no nitantanana azy. Nanapa-kevitra ny filoha Ratsiraka tamin'izany fotoana izany, izay heverina fa noho ny soso-kevitry ny Past. Andriamanjato Richard Mahitsison izay mpanohana mavitrika ny TGV amin'izao fotoana izao, fa hakana hetra avokoa ny fanafody ampidirina rehetra eto Madagasikara na dia maimai-poana aza no hanomezana azy amin'ny marary. Ny Hopitalin'i Manambaro no tena kendrena tamin'io fanapahan-kevitra io, mba tsy hahavitany na inona na inona. Nahombiazana ilay tetika satria tsy tamana intsony ireo mpitsabo Amerikana fa lasa nody. Dia tetika tahaka izany indray no averina eto amin'izao fotoana izao hahalao monina ireo vahiny rehetra eto Madagasikara afa-tsy ilay efa nolazaiko ery ambony ka tsy mila averina intsony angamba.
Mbola mila hazavaina indray ve? Izany hoe raha toa mahatonga vary eto Madagasikara ny PAM (Programme Alimentaire Mondial) ohatra ka mitatitra ny fanampiany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy dia andoavan'ny PAM habany ireo vary tongany hatao fanampiana ireo. Inona no antony hanaovany izany? Mety hihevitra avy hatrany isika fa noho ny tsy fahampian'ny vola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana no hanaovana izany. Tsy voatery ho izay anefa no tena tetika ao ambadika na mody ampisainina amin'ny Besinimaro fa misoroka izay mety ho zavatra ampidirin'ny masoivoho vahiny na fikambanana iraisam-pirenena eto izy. Raha sanatria manko mby amin'ny fanavotana ny firenena tsy ho lasa zanatany indray ny Malagasy dia tsy manana lalana ampidirana izay fomba hanakanana ny hanjanahana an'i Madagasikara afa-tsy amin'ny alalan'ireo masoivoho efa misy eto Madagasikara. Efa tsinjon'ny sasany izay lalana izay, ka dia ny fomba hialan'ireo Masiovoho sy fikambanana iraisam-pirenena ireo no tetika atao amin'izao fotoana izao. Mariho hatrany fa eo amin'ny resaka stratejia amin'izao fotoana izao no tena ilaina fa tsy resaka fanoherana bontolo na amin'ny fo intsony. Anjaran'izay tokony hanana fanapahan-kevitra hentitra hanavotana an'i Madagasikara ny mieritreritra fa nanao ny anjara tandrifiko aho aloha izay androany.
jentilisa, alahady 03 janoary 23:03
Misaotra @ vaovao!
F'angaha mbola mandidy manapaka ihany ny faty @ izao e? ary ireo roalahy tokony hiara-mitondra, na tsy manana birao aza, sy ny sonia tokony hiara-mipetraka @ izay rehetra hotapahina, aiza no fipetrany? ary ny kaongresy izay voalaza fa efa voapetraka?
Nampidirin'i gasi @ 08:40, 2010-01-04 [Valio]
Alefaso kely fotsiny anie ny saina e!
Iza ilay firenena milaza azo ho lehibe izay, mitady hanjaka tokana eto?
Nampidirin'i mamod rajimahl ganesh @ 11:09, 2010-01-04 [Valio]
Manao benefice be zany ny fjkm koa! de efa mitady raharaha koa izay manenjika fiangonana izany.
Nampidirin'i news2dago @ 11:49, 2010-01-04 [Valio]
Ataoko ahoana ny tsy hirary soa ho anao ho an’ity taona vaovao na dia marina aza fa betsaka ny « cinéma » sy fahazarana fotsiny. Mila fifankaherezana mafy isika malagasy fa izao zavatra lazainao izao no miandry mandritra ny taona dia ny tetika maizina sady ambadika no ambany. Latsaka ambany ny firenena fa inona no vaha olana Jentlisa o?
Nampidirin'i Mmm @ 13:03, 2010-01-04 [Valio]
Techniquement tsy territoire nasionaly malagasy ny masoho ivoho ivelany eto Madagasikara rehetra ary tsy manan-kery ao ny lalana malagasy. Ny organisma iraisam-pirenena ihany koa dia voaaro @ lalana iraisam-pirenena, izay marihina fa ambonin'ny lalana rehetra afa tsy ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana moa efa tsy misy tsony na tsy hay tsony hoe aiza ny babay sy lohovohitra, noho izany ny lalana iraisam-pirenena no manan-danja ambony indrindra @ zao fotoana izao...
Ny fiangonana sy ny sisa koa, techniquement tsy voa-qualifies hoe "societes" ary na mitazona boky kaontabla ara-dalana aza tsy misy hoe tombon-tsoa "imposable" ao... ra tsy hoe vao novaina nga ny kaody ny hetra... et encore tokony voaray doly rehefa fiangonana rehetra ra izay no izy...
bref, sao dia adalana miaro tsinjaka ny an'ny HAT ra izao no mitohy... ny anton'ny tsy hi-taxer-na ny mpanao asa soa dia noho izy indrindra hoe manao asa soa ary tsy misy tombony hoan'ny mpanao an'le izy afa tsy hoe asa soa vitany. Ra orinasa no ampiakarina ny hetra dia mazava hoazy fa any @ vidin'ny vokatra no hita taratra. Refa ny mpanao asa soa no asiana hetra dia ny asa soa no hihena goavana...
Aiza ho aiza @ izany ny fitiavan-tanindrazana/vahoaka???
mba amarino kosa alou le hoe sao dia tsaho ee... otran'ny dondrona be ny conseiller an'ny DJ manko ra tena marina haha
Nampidirin'i simp @ 14:09, 2010-01-05 [Valio]
Marina ny anao ry jentilisa. Ka inona no hataontsika? Hitan-takolaka sa hitana basy?
Nampidirin'i akamasoa @ 10:51, 2010-01-08 [Valio]
- Anisan'ny mitsikera ny hetraketraka, horohoro, vono olona, fandikàn-dalàna, ets ny FJKM, koa dia tsy maintsy hilàn' ny mpanongam-panjakàna ajojay, sakànana amin' ny asa fototra atrehiny. - rehefa tiana akorontana ny tany, dia atao izay tsy hisian' ny vavolombelona avy any ivelany, na koa izay aha vitsy dia vitsy an'ireo mety hampiely ny vaovao marina, koa dia ny mialoha, dia atao izay aha sesy azy ireny, lasa mody ny ankamaroany. - Ary satria sady mangorona izay ho azo, no maika ny hametraka ny rafitra malotony ny mpandromba-pahefana, dia tsy maintsy mamorona tsaho, ady hevitra mandany fotoana, mba ahavariana ny sain' ny mpandinika, nefa izy manodina sy misisika amboletra ihany - Voitenan' izay mbola tsy ho tonga saina ihany e !
Nampidirin'i Mailou-x2 @ 00:30, 2010-01-16 [Valio]